Kooxdii ugu horreysay ee Ingiriiska ka dhisan oo wadahadallo la billawday Philippe Coutinho – Gool FM
(England) 27 Maajo 2020. Kaddib markii ay Bayern Munich iska diidday inay joogto ka dhigto heshiiskii amaahda ahaa ee uu Philippe Coutinho kula joogay, waxaa la rajeynaa inuu dhammaadka bisha Juun ku soo laabto kooxda Barcelona.
Mundo Deportivo ayaa warineysa in Newcastle ay durba u dhaqaaqday saxiixa laacibka reer Brazil, iyagoo durba xod xodasho iyo wada xaajood billaabay.
Coutinho ayaa xiiso badan ka helaya kooxaha ka ciyaara Premier League sida Manchester United, Chelsea iyo Arsenal oo dhowaan ku soo biirtay loollankiisa, xilli lagu soo warramayo inay Barcelona laacibkan ku qiimeysay 71 milyan oo gini.
27-jirkan ayaa la tacaalaya dhaawac ka soo gaaray anqowga, taasoo ka dhigan inuusan xilli ciyaareedkan inta ka harsan garoomada ku soo laaban doonin.
Si kastaba ha ahaatee, haddii Newcastle ay hesho maal galin gaareysa 300 milyan oo gini, waxaa la rajeynayaa inay dib u qaabeyn doonaan safkooda, xilli saxiixyada lala xiriirinayo uu hormuud u yahay Coutinho kaa soo horraan ka soo ciyaaray horyaalka Ingiriiska xilligii uu ku sugnaa Liverpool.
Kubbad qaabeeyahan ayaa Barcelona ku biiray bishii Jannaayo 2018, balse ma uusan u iftiimin sidii la filayay, taasoo sabab u noqotay in Bayern Munich amaah loogu diro xilli uu Bundesliga ka dhaliyay 8 gool, lix kalena caawiyay kaddib 22 kulan.
Isku soo wada duub e, qandaraaska uu Coutinho hadda ku joogo garoonka Camp Nou waxa uu idlaan doonaa 2023, waxaana mustaqbalkiisa sii joogista Barca uu yahay mid uu shaki badan hareeyay.